Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (၁၁) ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်း (The...
သမ္မာကျမ်းစာသည် “အသွေးနှင့်ပြည့်စုံသောစာအုပ်” bloody book ဖြစ်ကြောင်း ခေတ်ပေါ်လွှတ်လပ်ရေးဝါဒီ တရားဟောဆရာများ(liberal teachers) ကပြောဆိုတတ်ကြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အာဒံနှင့် ဧ၀တို့၏အပြစ်ကြောင့် ရှက်ကြောက်နေမှုကို အကာအကွယ်ပေးရန် သိုးငယ်တစ်ကောင်ကို သတ်၍အသွေးသွန်းခဲ့ရ သော
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (၈) သခင်ယေရှုခရစ်...
သင်ခန်းစာ အမှတ် (၇) ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်
ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ခရစ်ယာန်တို့၏ အခြေခံပုံသေ ယုံကြည်ချက်အားလုံးတို့၏ ပေါက်ဖွားရာ အရပ်နှင့် အခြေခံရှုမြင်ရသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ယဉ်ကျေးမှုတို့၏ လက္ခဏာနှင့် မူလအမြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (၇) ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်
ခရစ်ယာန်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားသည်ဟူသော ကိစ္စသည် လွယ်လင့် တကူလက်ခံသောကိစ္စတရပ်သာဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကနဦးအသင်းတော်ကပင်ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက် ၍ တိုက်ရိုက်ငြင်းခုံခဲ့ကြပါသည်။ ဂျူးခရစ်ယာန်အနွယ်ဖြစ်သော Eborites များက ငြင်းပယ်ပြီးခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (၆) ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာဝမ်းမှ...
ငရဲအကြောင်း ယုံကြည်ချက်နှင့် ကတ်သက်၍ လေ့လာခြင်းကဲ့သို့ အခြားအကြောင်းအရာ လေ့လာခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်အားငယ်မှု ဝမ်းနည်းမှု၏ တစ်ခါတစ်ရံမျက်ရည်ကျလျက် ငိုကြွေးမှုအထိဖြစ် စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ခရစ်တော်ကို မယုံကြည်သောသူများ ငြင်းပယ်သောသူများတို့အား ထာဝရကာလတွင် ပြင်းထန်ဆိုးရွားစွာစံ
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (5) ငရဲ
၀ိညာဉ်လောကနှင့်ဆိုင်သောအရာများကို လက်မခံသူများသည်နတ်ဆိုး၊ ၀ိညာဉ်ဆိုးများရှိကြောင်းကို ငြင်းဆို ကြပါသည်။ ခရစ်တော်သည်နတ်ဆိုးတို့အား နှင်ထုတ်ခဲ့သည်မှာလည်း ဆိုးသွမ်းမှုအပေါ်အနိုင်ယူခြင်းကို ဖော်ပြသော လက္ခဏာသာဖြစ်သည်ဟု အချို့ပြောကြပါသည်။ ဘာသာရေးအယူသီးနေသူတို့၏ခံယူချက်ကို သက်သာမှုဖြစ်စေရန်
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (၃) နတ်ဆိုး၊ ၀ိညာဉ်ဆိုးအကြောင်း
ဤစင်္ကြာဝဠာကြီးတွင် စာတန်သည် ဘုရားသခင်ပြီးလျှင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာကဖော် ပြထားသည်။ ယနေ့မြောက်များစွာသော လူတို့သည်စာတန်၏ အကြောင်းကိုရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (၂) စာတန် (SATAN) အမှန်ရှိခြင်း၊...
ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ အကျင့်သည်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့သက်ဆိုင် ရာကဏ္ဍအသီးသီးရှိကြကြောင်းကို အငြင်းပွားရန်မလိုပါ။ ယုံကြည်သူသည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (၁၄) ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရား...
သမ္မာကျမ်းစာသင်ခန်းစာ “ယေရှုခရစ်၏ဘုရားဇာတိ” The Deity of Jesus Christ
သင်ခန်းစာ အမှတ် (၁)
Read more: သမ္မာကျမ်းစာသင်ခန်းစာ “ယေရှုခရစ်၏ဘုရားဇာတိ” The...
ဤရှင်လုကာကျမ်းရှိ ခရစ်တော်၏သက်တော်စဉ်ကို သမားတော်လည်းဖြစ်၊ ရှင်ပေါလု၏ခရီးသွားဘော်လည်းဖြစ်သော ရှင်လုကာက ရေးသားခဲ့သည်။ ဤကျမ်းသည် သူရေးသားခဲ့သော ကျမ်းနှစ်ကျမ်းအနက် ပဌမကျမ်းဖြစ်သည်။ (ဒုတိယကျမ်းမှာ တမန်တော်ဝတ္တုဖြစ်သည် (တ၁း၁)ကို ကြည့်ပါ) ဤကျမ်း၏ အဓိကအကြောင်းအရာကို
Read more: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း (မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်)
My favorite Words No.27, Chaâm Ngoân, Proverb, သုတ္တံကျမ်း , 箴 言
1 Chôù khoe khoang veà ngaøy mai; V́ con chaúng bieát ngaøy mai seơ sanh ra ñieàu ǵ.
၁ နက်ဖြန်နေ့ကို အမှီပြု၍ မဝါကြွားနှင့်၊၊ တရက်အတွင်းတွင် အဘယ်သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ကို မသိနိုင်၊၊
1 不 要 为 明 日 自 夸 ， 因
Read more: My favorite Words No.27, Chaâm Ngoân, Proverb,...
ကောင်ကင်ဘုံဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းသလဲ စဉ်းစားမိပါသလား? ကောင်းကင်ဘုံဟာ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လို့၊ အလှပဆုံးအရာထက် ပိုလှပပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ရွှေစင်အစစ်၊ တန်ဘိုးအကြီးဆုံးကျောက်မျက်ရတနာများနဲ့ ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကြီး ၁၂ချပ်ကို ဖြက်ပြီး
Read more: ကောင်းကင်ဘုံသို့သွားသောလမ်း၏ အဆင့်၅ခု - UBDavid